पहलकदमी – Purna Oli
January 8, 2019 Purna Oli0Comments
जब पुसमाघको अति जाडो मौसम आउँछ, त्यो डाँडोले दिउँसो दशबजेसम्म घाम छेकेर चिस्याइराख्छ । अनि, सोलाबाङ कठ्याङ्ग्रिएर थुरथुर काँपेको मज्जाले हेरिरहन्छ । जब गर्मीको समय आउँछ झुल्कनेबित्तिकै दिनलाई यतै लखेटिदिन्छ र दिनभरिको उखरमाउलो दिनको पोलाइले ऐया र आत्थु पारिरहन्छ । सोलाबाङ, जो मुसिकोटको पाउ हो, बसेर हेर्दा भलाक्चा अत्यन्तै दुरुह र पीडादायक लाग्छ । त्यो भलाक्चा, मुसिकोटको सधैँ कडा प्रतिष्पर्धी रहिआएको छ ।
भूगोलको हिसाबले पनि मुसीकोट डाँडा जसरी घोडाको पिठ्यूँको आकारमा पूर्वपश्चिम सुलुत्त परेर फैलिएर उभिएको छ, भलाक्चा डाँडाको संरचना पनि ठ्याक्कै उस्तै छ । तर त्यो अग्लो छ र हात्ती आकारको छ । राजनैतिक हिसाबले पनि मुसिकोटका नेताहरुकै प्रतिष्पर्धाका नेताहरु जन्माइरह्यो भलाक्चाले । बौद्धिक हिसाबले, मुसिकोटका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिभन्दा अब्बल र डबल जनशक्ति जन्माएको हुनुपर्छ भलाक्चाले । समाजवादका पाइला पछ्याउने पहलकदमी उठाउनेमा पनि भलाक्चा नै अगाडि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
यदि तपाईँ पश्चिम रुकुम पुग्नुभयो, तर पूर्वी रुकुम पुग्न सक्नुभएन भने भलाक्चासम्म पुगे हुन्छ । पूर्वी रुकुमका धेरै विशेषताहरु भलाक्चाले अद्यापि अँगालोमै बेरेर राखेको हुनुपर्छ ।
जब म सेरीगाउँबाट आठकक्षा पढ्न खलंगा हाइस्कूल उक्लिएँ, मैले दशकक्षा नसकुन्जेल भलाक्चे हिमबहादुरको कडा प्रतिष्पर्धाको सामना गर्नुपर्‍यो । भलाक्चातिरबाट आउने विद्यार्थीहरुका टाउकाहरु नै बडेमानका हुन्छन् । उनीहरुको पाखुरातिर तपाइँका नजर पुगे भने सातो जानसक्छ, यामानका ठूलाठूला हुन्छन् । अझै डरलाग्दा त पिँडौला हुन्छन् । पहलमानका जस्ता फनक्क बटारिएका । हात्तीजस्तो शरीर हुन्छ । हात्तीमा मानिसजस्तै बुद्धि भैदिएको भए के हुन्थ्यो ? अस्तित्व रहन्थ्यो होला यो मान्छे नामको पशुको ? तर ती हात्तीहरुमा दिमाग पनि भरेर पठाइएको चुनौतीपूर्ण इलाका हो भलाक्चा । यस्तासँग प्रतिष्पर्धा गर्न कति सकसपूर्ण हुन्थ्यो होला ।
अहिले भने मुसिकोटले आफ्नो अँगालोमा बेरिसकेको रहेछ त्यो सन्निकट प्रतिष्पर्धीलाई । खुशी हुनुपर्ने हो म । तर पटक्कै खुशी हुन सकेको छैन । लाग्छ, नजिकैको प्रतिष्पर्धीलाई समाप्त गर्नु भनेको आफ्नै प्रतिष्पर्धी योग्यताहरु समाप्त गर्नु हो । आफ्नै दक्षताहरुलाई कमजोर तुल्याउनु हो ।
मेरो माइलामामा लक्षिराम वर्षौँवर्ष भलाक्चामा शिक्षक हुनुभयो । त्यतैबाट बिहे गर्नुभयो । अहिले मेरो मामाघरको एक हँगालोमा भलाक्चाकै रगत बगिरहेको छ । मामा आफै विलक्षण प्रतिभाको धनी हुनुहुन्थ्यो । जसलाई उहाँले प्रेमजालमा छोपेर ल्याउनुभयो, सायद माइलीमाइजु सँग पनि त्यस्तै प्रतिभा थियो होला । अत्यन्तै सुरिलो भाकामा गीत गाएको धेरै पटक सुनेको थिएँ मैले ।
म एक शारदीय बिहानीमा भलाक्चाको डाँडोमा माइलामामासँगै पुगेको थिएँ । रामायणमा वर्णित स्वर्ग मैले त्यहीँ भेट्टाएको थिएँ पहिलोपटक ।
त्यसबेलादेखि मैले डाँडोतिर मात्र ध्यान दिन छोडेँ । भलाक्चाबाट बगेको साँखखोलाको पानी मेरो बारीमा आइपुग्थ्यो । त्यही डाँडोमा ठोक्किएर मेरो गाउँमा वर्षा हुन्थ्यो । डाँडोले छेक्ने घामभन्दा त्यसले दिने पानीकै महत्त्व देख्न थालेको थिएँ त्यसपछि ।
केही वर्षअघिसम्म के तपाईँले साँखखोलाको पानी सुँघ्नुभएको थियो कहिल्यै ? त्यो पानी रक्सी र जाँड गन्हाउँथ्यो । लाग्थ्यो, साँखखोलामा पानी होइन, जाँड बगिरहेको छ । जाँडसँगै पसिना बगिरहेको छ । त्यो जाँड पसिना भलाक्चेहरुको थियो । त्यो गन्धमा भलाक्चेहरुको बुद्धि बगिरहेको थियो । त्यो गन्धमा भलाक्चेहरुको सामर्थ्य बगिरहेको थियो । त्यसैमा मेरो माइलामामाको क्षत्रियपन बग्यो र आखिरमा जीवन नै बग्यो ।
सबथोक बग्दाबग्दै पनि भलाक्चेहरु मुसिकोटका प्रतिष्पर्धी भई नै रहे । भई नै रहे ।
दुःखको कुरा यो अत्याधुनिक युगमा ती सामर्थ्यवान भलाक्चेहरु मुसिकोटेको कब्जामा परिसकेछन् । मन कताकता कटकटी खाइरह्यो ।
कसैले भनेको थियो मलाईः ‘तिम्रो नाम नै कन्याराशी रहेछ तसर्थ तिमी अत्यन्तै कमजोर छौ ।’ सुन्दा झनक्कै रिस उठेको थियो । तर के गर्ने ? मेरो शरीर पुलिङ्गी भए पनि मन भने स्त्रीलिङ्गी नै छ । मेरा सबै प्रस्तुतिहरु कोमल छन् । यसले हिनताबोध पनि गराउँछ घरिघरि । मेरो नाम किन कन्याराशी राखिदिए होलान् पुरेतले ?
………. …………. …
जब म एकजना साथी सम्झन्छु मलाई त्यो स्मृतिले ढाढसको काम गर्छ । नाम मात्र हो र ? जात पनि कन्याराशी ! उनलाई देखेपछि खुच्चिङ भन्छु ।
तर माइनसमा माइनस थपिँदा प्लस हुने सिद्धान्तले भने खङ्ग्रङ्गै हुन्छु । हुन पनि उनको शरीर नै पहलमानजस्तो छ, नडराउने कुरै छैन ।
हो, उनी पनि भलाक्चाबाटै झुल्किएका थिए शुरुमा । किशोरावस्थामै बडेमानको टाउको । बडेमानको छाति । ठूलाठूला पाखुरा र पिँडौलाहरु । मैले यिनलाई भलाक्चे नै ठान्थेँ । त्यत्रो शरीरमा पनि बुद्धि पनि एक भारी राखिदिएको थियो कसैले । मुसिकोटमा पढुन्जेल बुद्धि र बल दुवैले हायलकायल पारिराखे मुसिकोटे विद्यार्थीहरुलाई ।
विद्यार्थी राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै अब्बल । आफ्नो विद्यार्थी संगठनका होलटाइमरहरुलाई पनि पारेहोलान् हायलकायल ।
मुसिकोटमा हायलकायल पार्नु कुन ठूलो कुरा थियो र भन्ठान्नुहोला तपाईँ ? सुन्नुभएको छ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको नाम ? अहिलेसम्म त्यो क्याम्पसमा छिर्न पाउनेलाई भाग्यमानी ठहर्याइन्छ । हामी आफ्ना छोराछोरीलाई हरेकचोटी आशिक दिँदा ‘इन्जिनियर भएस् !’ भन्ने गर्थ्यौँ । अहिलेजस्तो ‘अमेरिका, बेलायत छिरेस् !’ भन्ने आशिक होइन । हो त्यही क्याम्पसका सयौँ विद्यार्थीलाई समेत हायलकायल पारिरहेका भेटिन्थे उनी । पढाइमा होस् कि, विद्यार्थी राजनीतिमा होस् कि, साहित्य प्रतियोगितामा होस्, जुन प्रतिष्पर्धा आइपर्यो त्यसैमा एककदम अगाडि । मनमनै भन्थेँ पहिलोकदमी ।
गेस गर्नुभयो ? तपाइँको गेसले फेल खाएको छैन । उनी पहल पुन नै हुन् !
४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएको केही समयपछिको घटना हो । मुसिकोटमा गणतन्त्रलाई पक्षपोषण हुने एउटा नाटक देखाइयो । नाटकमै ‘राजतन्त्र मुर्दाबाद !’ भन्ने नारा घन्काइयो । सायद राजतन्त्रको विरोधमा पहिलो नारा थियो होला त्यो । सायद पहल नै थिए कि त्यो नारा उराल्ने पनि । अहिले कथनको रुपमा भन्दा सामान्य लाग्छ तर त्यसबेला त्यो नारा एकदमै जोखिमपूर्ण थियो ।
भोलिपल्ट रुकुमका आकाशमा सेनाका हेलिकप्टरले आकाश ढाकिरहेको थियो । जेठअसारमा आकाशमा देखिने कालाकाला धब्बा बादलहरुले पारेको छायाँभन्दा निकै डरलाग्दा थिए ती छायाँ । नेपालीसेनाहरु कहिले पनि नदेखेका मुसिकोटवासीको लागि एकैपटक दर्जनौँ हेलिकप्टरहरुबाट सयौँ सेनाहरुको फौज ओरालिँदा कतिको त मुटु पनि फुट्यो होला ।
सुनियोः त्यही नाटक देखाएको अपराधमा पहल पुनलाई पनि ल्याइँदै छ रे रुँघाबाट । हामी सोलाबाङको बार्दलीहरुमा निस्केर जीउ लगलगी कँपाउँदै मुटु थामेर त्यो दृश्य लुकीलुकी हेरिरहेका थियौँ । ठाँटीबजारबाट कालो न कालो वस्त्रधारी सेनाहरुको लाम उकालो लाग्यो र लामको अग्र भाग सोलाबाङ गाउँको किनारकिनारै पश्चिमतिर पुगिसकेको थियो । तलबाट उक्लिरहेको कमिलाजस्तै लाम टुङ्गिएकै थिएन पुच्छर देखिएकै थिएन । तिनीहरुको बीचमा हाम्रो स्मृतिमा यसरी नाचे पहलः
‘पहललाई भर्खर ब्याएको पाडोलाई घिसारेजस्तै घिसारेर ल्याइँदै छ । घिसार्ने सेनाहरु सातआठजनाजति उनका हातखुट्टा समात्नको लागि वरिपरि छन् । उनलाई राइफलको कुन्दाले ठोकिँदै र पिटिँदै छ । कहिले पनि हाँसो नओइलाउने पहलको मुखबाट पीडाले चित्कार छोडिरहेका छन् । त्यो चित्कारको प्रतिध्वनि पहाडमा ठोक्किँदा निकै डरलाग्दो र उराठलाग्दो भएको छ । ढुङ्गे बाटोमा घिसार्दा घिसार्दा लुगा च्यातिइसकेका छन् उनका । जीउभरिबाट भलभलि रगत बगिरहेको छ । अनुहार हेर्दा चिनिँदैन । उनलाई देख्ने कमजोर आत्मा भएकाहरु मुख छोपीछोपी रोइरहेका छन् ।’
यस्तो कल्पना गर्नु अनौठो थिएन । तपाईँ जङ्गलमा एक्लै परेको बखत दर्जनौँ बाघहरुले तपाईँलाई घेरा हाले भने के गर्नुहुन्छ ?
हो, त्यतिबेलाको समयमा कहिले पनि सेना नदेखेका मान्छेहरुको लागि सेना भनेका जङ्गलका हिँस्रक बाघहरु नै थिए । मानवभक्षी बाघ नै थिए भनेर सुनाइन्थ्यो ।
हामी यही कल्पनामा डुबिरहेको बखत सेनाको बीचबाट एउटा सुरिलो हाँसो नाच्दै हाम्रो कानसम्म आइपुग्यो । यो खितितिति हाँसो चीरपरिचित हाँसो थियो । त्यो हाँसोसँग सेनाको हाँसो पनि मिसिएको थियो । हामीले त्यतातिर आँखा निज्याइनिज्याइ हेर्न थाल्यौँ । सेनाहरुकै फौजको बीचमा उही भलाक्चे हात्ती लमकलमक लम्किरहेको थियो । हामीले चिनिहाल्यौँ त्यो हाँसो पहलकै थियो । निर्धक्क लम्किने मात्र होइन बुद्धिविनोद गर्दै थियो ऊ सेनाहरुसँग । उनीहरु पनि पहलसँग निर्धक्क रमाइरहेका थिए । यो दृश्य देखेपछि छचल्किएका थिए देख्नेहरुका विस्मयका आँशुहरु । सेनाप्रतिको आतङ्कको अविश्वास सर्लक्कै माझिएको थियो । दन्तेकथामा सुनिने बाघ र हात्तीको अनौठो मित्रता आफ्नै आँखाले देख्न पाउँदा तीनछक परेका थिए गाउँलेहरु ।
पछि सुनिएको थियो जनार्दन लगायत पहलहरुलाई छोप्ने खर्च त्यतिबेलाको साठीलाखभन्दा धेरै पुगेको थियो रे । अहिलेको साठीकरोडभन्दा धेरै खर्च ।
पहलसँग केही भन्नलायक र केही लुकाउन लायक कथाहरु अरु पनि छन् मसँग । लुकाउन लायकलाई दुलामै छोडेर भन्न लायक केही कथा भन्दैछु म ।
उनी र मैले एउटै कक्षामा नपढे पनि आसपासको कक्षामा पढ्यौँ खलंगा हाइस्कूलमा । त्यसबेलासम्म परिचयको हिसाबले उनको र मेरो बीचमा केही दुरी कायम थियो, तसर्थ राम्रोसँग बुझ्न सकिन उनलाई । अध्ययनको सिलसिलामा जब काठमाण्डौ पुगेँ त्यसबेला उनले मलाई नजिकैबाट धेरै सहयोग गरेका थिए । उनी नभैदिएको भए मङ्गलबजारको सदरखोरमा कति दिन थुनिन्थ्यौँ होला सम्झँदै काँडा फुल्छन् । त्यो स्मरण अत्यन्तै रमाइलो छ । जो मुकुन्द शर्मा र ओपेन्द्र शर्मासँग पनि जोडिएको छ । त्यो संस्मरण अर्को भागमा आउने नै छ ।
त्यसबेला विद्यार्थी नेता नेत्रविक्रम चन्दका निकट साथी थिए पहल पुन । चन्दलाई हाम्रो कोठा चिनाइदिने पहल नै हुन् ।
काठमाण्डौ बसाइको दुईवर्षे अन्तरालमा पहलको निकटमा रहेर हाम्रो साथ उति धेरै जुरेन । एउटा कारण थियो उनी इन्जिनियरिङका विद्यार्थी थिए । उनको पढाइ नै उनलाई भारी थियो । त्यो भारीको सँगसँगै विद्यार्थी राजनीतिको भारी पनि जसोतसो बोकेकै थिए । दुवैलाई तालमेल मिलाउँदैमा उनलाई फुर्सद हुँदैनथ्यो । दोस्रो कारण थियो विद्यार्थी राजनीतिको हिसाबले हामी धेरथोर डरपोक नै थियौँ । सकभर पहलसँग जोगिएरै हिड्नपाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्थ्यो ।
उनीसँग साथ गर्ने इच्छा भने मसँग उर्लिरहेको थियो । राजनीतिभन्दा पर केही चिज देखिरहेको थिएँ मैले पहलको व्यक्तित्वमा । साथ खोज्ने कारण सायद त्यही थियो ।
मलाई त्यतिबेलाका चर्चित नेता मष्तबहादुर श्रेष्ठको सहयोगले स्थानीय नेता हिराचन्द्र मल्लले सिम्रुतु स्कूलमा ल्याए । ल्याउने मात्र होइन हाइस्कूलको हेडमास्टरको जिम्मेवारी नै सुम्पिदिए । बौद्धिक हिसाबले भलाक्चाले मुसिकोटसँग गर्नुपर्ने प्रतिष्पर्धा त्यतिबेला सिम्रुतुमा सरिसकेको थियो । किनभने भलाक्चा निमावि मात्र थियो र भलाक्चाकै समर्थन र सहयोगमा सिम्रुतुमा प्रस्तावित हाइस्कूल स्थापना हुन सकेको थियो ।
हिराचन्द्र मल्ल आफै कुशल राजनीतिज्ञ थिए । कुशल राजनीतिको कारणले पूर्वराजा वीरेन्द्रबाट सम्मान थाप्नेमा उनी पनि एक थिए । हिराचन्द्रलाई बौद्धिक परामर्श दिने विश्वेश्वर पोख्रेल थिए । यिनीहरुको पहलकदमीले सिम्रुतुमा प्रस्तावित हाइस्कूल जुर्मुराउँदै थियो । त्यसलाई जसोतसो जोगाउनु थियो यिनीहरुले । जोगाउनुको अर्थ किन भनियो भने मुसिकोटले यस स्थानमा हाइस्कूल स्थापना भएको देखिसहेको थिएन । त्यस स्कूललाई जरैदेखि पल्टाइदिने धम्कीहरु पनि आउँदथे रे । सर्वेसर्वा मुसिकोट नै थियो त्यतिबेला । यस हिसाबले निकै कठिन थियो सिम्रुतु स्कूललाई निरन्तरता दिनु । शैक्षिक र प्रशासनिक सहयोग शून्यप्रायः थियो ।
त्यस्तो परिस्थितिमा सिम्रुतुमा मलाई नै हेडमास्टर बनाइएकोले त्यसको दुष्प्रभाव धेरैपछिसम्म खेप्नुपर्यो मैले । मुसिकोट निवासी मलाई नै सितिमिति मुसिकोट स्कूलमा अध्यापनहेतु छिर्न दिइएन । मुखमै पुर्‍याइसकिएका गासहरु पनि खोसियो धेरै पटक । अन्ततोगत्वा निजामती सेवामा छिर्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यसकै परिणाम थियो ।
सिम्रुतुलाई जोगाउने पक्षका राजनीतिज्ञहरु पनि कम चलाख थिएनन् । त्यसबेला जिल्लाका विद्यालयका टपरहरुलाई सिम्रुतु स्कूलमा ल्याइन्थ्यो । फलस्वरुप मेरो पालामा जीतबहादुर शाह, पहल पुन, गङ्गालाल ओली, धनबहादुर ओली, डिल्ली मल्ल, छविलालद्वय आदिलाई शिक्षकहरुमा खोजीखोजी नियुक्ति दिइयो ।
यसरी नियुक्त शिक्षकहरुको मुख्य कर्तव्य सिम्रुतुलाई टिकाउनु जगेर्ना गर्नु र शैक्षिक हिसाबले मुसिकोटलाई टक्कर दिनु थियो ।
एसएलसी उत्तीर्ण गराउने हिसाबले मुसिकोटलाई नै टक्कर दिनु भने गाह्रो थियो । त्यतिबेला अतिराजनीतिको कारण विद्यार्थीहरु पढाइमा कम र विद्यार्थी राजनीतिमा बढी लागेका थिए । मैले बारम्बार सम्झाउँथेँ विद्यार्थीहरुलाई, ‘पहिलो प्राथमिकता पढाइलाई देऊ । दोस्रो प्राथमिकता बाँकी कुरालाई ।’ तर परिस्थिति मेरो वशमा हुँदैनथ्यो । अब्बल विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि उनीहरु नियमित पढ्न सक्दैनथे र हाम्रो एसएलसी रिजल्ट कमजोर बन्न पुग्दथ्यो । घरको कुकुर बलियो भनेझैँ घरभन्दा बाहिर निस्किएर एसएलसी परीक्षा दिन त मुसिकोट नै जानुपर्थ्यो । होमसेन्टरले प्राप्त गर्नेजति लाभ मुसिकोटले लिन्थ्यो भने त्यसको हानी सिम्रुतुले बेहोर्थ्यो ।
तर अतिरिक्त क्रियाकलापका प्रतिष्पर्धाहरुमा भने सिम्रुतुले नजिकैबाट टक्कर दिइ नै रह्यो मुसिकोटलाई । खेलकूद प्रतियोगिता, साँस्कृतिक प्रतियोगिता, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला प्रतियोगिताहरुमा ।
शुरुशुरुमा पहल-जीतबहादुरको नेतृत्व गर्न के सकिएला र भन्ने डर पनि लागेको थियो । तर यी पढाइका हस्तीहरुसँग भेट भएपछि सामान्यीकरण हुँदै गयो । विद्यार्थीहरुलाई कसरी प्रतिष्पर्धी तुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी अहोरात्र खटिन्थ्यौँ । यसमा सबै शिक्षकहरुको उत्तिकै सहयोग पाएँ मैले । जिल्लामा त के विश्वविद्यालयहरुमा समेत छाँटिँदै कुशलतापूर्वक अब्बल निस्किएका साथीभाइहरुबाट निर्बाध सहयोग पाउनु मेरो भाग्य नै थियो । नत्र त हेडमास्टर हुनसक्ने क्षमता उनीहरुको नै बढी थियो । के कमी थियो र पहलमा ?
शुरुशुरुमा त लाग्थ्यो यिनले हामीहरुलाई हायलकायल पार्नेछन् । तर हामीबीच हायलकायलको नामोनिशान नै रहेन । ती साथीभाइको सहयोगमा अलिकति बढी सहयोग मैले पहलबाट पाइरहेको थिएँ । उनको हात्तीजत्रो छातिको बलको सहयोग त जरुरत परेन, तर अरु सहयोग भने भरपूर पाएँ । जीतबहादुर शाहका अभिन्न मित्र थिए पहल । साहित्यिक रुचि उस्तै थियो । पढाइको उस्तै थियो र अतिरिक्त रुचि उस्तै थियो । यति हुँदाहुँदै पनि यी कुराहरु कतै नमिल्ने मसँग पनि उत्तिकै मन मिल्न पुग्यो । त्यति मात्र होइन त्यस स्कूलको शैक्षिक नेतृत्वको सम्बन्धमा मेरो प्रत्यक्ष अगाडि कहिले पनि मेरो विरोध भएन । यो नै मेरो लागि अहोभाग्यको कुरा थियो ।
धेरै दिनदेखि पहलजीले मलाई आफ्नो घरमा खाना खाने निम्तो दिइरहेका थिए । मैले जान फुर्सद पाइरहेको थिएन । एकदिन म पहलको घरमा जाने फुर्सद निकालेँ । चारबजे छुट्टी भएपछि दुवैजना कुरा गर्दै गर्दै रुँघाको उकालो काट्यौँ । उनको घरमा पुग्दा अँध्यारो भैसकेको थियो । उनको झुप्रो भन्न सुहाउने खालको अति सामान्य पहाडी घर थियो । मलाई त्यस घरको एउटा कोठामा पुर्‍याइयो । कोठामा जब पाइलो टेकेँ, कोठाको सजावटले म मन्त्रमुग्ध भएँ । पहिलोपटक यसरी चिटिक्क मिलाएको कोठा देख्दैथिएँ । खाटमा बाक्लो बिछ्यौना थियो । सुन्दर रङको सफा तन्ना बिछ्याइएको थियो । कोठामा भर्खर बुनिएका गुन्द्रीहरु बिछ्याइएको थियो । राजनीतिक पुस्तकहरुभन्दा साहित्यिक पुस्तकहरु बढी देखिन्थे र चिटिक्क मिलाएर दराजमा राखिएको थियो । भित्तामा टाँसिएका प्रमाणपत्रहरुले थप शोभा बढाएका थिए । घुगुतीहरुमा विभिन्न प्रतियोगिताका तक्माहरु झुण्डिएका थिए । लाग्थ्यो रुकुमको रुँघामा होइन, कुनै शहरको व्यवस्थित संग्रहालयमा पुगेको छु म ।
पहलको आमाले खाना खुवाउँदाको आतिथ्यता र खानाको स्वाद कहिल्यै भुलिनसक्नु थियो ।
खाना खाइसकेपछि हाम्रो साहित्यिक र पारिवारिक गफतिर लाग्यौँ । गफ यसरी गहिरिँदै गए कि नितान्त व्यक्तिगत कुराहरु हुन थाले । उनको पारिवारिक अवस्थाको इतिहास पीडाले भरिपूर्ण थियो । कुरा गर्दा उनका आँखामा टिलपिलटिलपिल आँशु निस्किरहन्थे । ओठ पिलपिल भइरहन्थे । मलाई अनौठो लागिरहेको थियो । बाघको बीचमा लम्कने त्यति ठूलो हात्ती यतिसम्म कमजोर पनि हुँदोरहेछ । त्यति चौडा छातिमा यतिविधि कमलो मन हुँदोरहेछ । म पनि उनको कथा र उनको दिलको महानताले द्रविभूत भैरहेको थिएँ ।
करिब बाह्रबजेसम्म हाम्रो गफ सकिएको थिएन । रात धेरै बितेकोले गफ बिट मार्ने कुरा भयो । सुत्नु अघि पिसाब र फेर्न बाहिर निस्कियौँ । पहलले भन्दै थिएः ‘टाढा नजानुस्, लड्नुहोला ।’ म भने त्यो अँधेरी रातमा पनि घरदेखि झन्झन् टाढाटाढा गएँ ।
मलाई साविककै कोठामा पुर्याएर पहल अर्को कोठामा सुत्न गए । कोठाको खाटमा जब सुतेँ कोठा गन्हाउन थाल्यो । यता फर्किएँ यतै गन्हाउन थाल्यो । उता फर्किएँ उतै गन्हाउन थाल्यो । म जर्पत्ताल उठेँ र सलाई बालेर हेरेँ । धत्तेरिका ! मैले त पिसाब फेर्न जाँदा गुहू कुल्चेर पो आएछु ! त्यो गुहु ओछ्यान, सिरक जताकतै लतपतिएछ । के गर्ने कसो गर्ने केही भेऊ पाइन । आखिरमा आफ्नै गलबन्दीले पुछ्न थालेँ । गुन्द्रीमा पनि लतपतिएछ । गुन्द्रीमा पनि पुछेँ । तर पुछ्दैमा न त दाग हरायो, न त गन्ध नै । पहलले के भन्ठान्लान् ? यो अवस्था देखेर के भन्लान् ? उनको आमाले के भन्नुहोला भोलिबिहान ? यति सुन्दर कोठा मैले गुहू लतपताएर बिगारिदिएको थिएँ । जानीजानी त होइन, तर बाहिरबाट भित्र पस्दा खुट्टातिर ध्यान नदिनू, नपखाल्नु मेरो ठूलो भूल थियो । नजिकै भर्खरै कलधारा जोडिएको थियो ।
रातभरि गन्ध र चिन्ताले म निदाउन सकिन । मीठा गफहरुमा हात्तीबाट मुसोमा परिवर्तन भैसकेका पहल । अब मेरो नजरमा पुनः हात्तीभन्दा पनि भयंकर ठूलाठूला प्रतित हुन थाले ।
भोलिपल्ट उज्यालो नहुँदै म उनको कोठाबाट बाहिरिएँ । अलि पर पुगिसकेपछि भनेँ : “पहल सर म गएँ है ।”
त्यस दिन खलङ्गा जाने निहुँले स्कूल नै छाडिदिएँ र भोलिपल्ट पनि स्कूल आइन । पर्सिपल्ट पहललाई छलेर यताउता लागिरहेँ, उनको मुख नै हेर्न सकिन । हप्तादिनपछि बल्लतल्ल वातावरण सहज हुँदै गएको महशुस भयो । तर यो बीचमा पहलले मेरो त्यो कमजोरी कहिल्यै औँल्याएनन् । अहिलेसम्म पनि न रउनले त्यस घटनाको सम्बन्धमा केही भनेका छन्, न त मैले ‘त्यस दिन मेरै गल्तीले कोठा सबै बिगारिदिएँ, क्षमा दिनुहोला है !” भन्नसकेको छु ।
छक्क त त्यसपछि परेँ जब उनले केही हप्तापछि फेरि आफ्नो घरमा बास बस्न निम्तो दिए । अरु भैदिएको भए मलाई छिछि र दूरदूर गरिरहन्थे होलान् । मलाई त्यही कुरा देखाएर लज्जित तुल्याइराख्थे होलान् । तर उनले साथीको मनमा कुनै पश्चात्ताप नहोस् भनी त्यो कुरा पचाइदिए । कुरा उठाइदिन आवश्यक नै ठानेनन् ।
सलाम छ त्यो माहुतेलाई जसले पहलरुपी हात्तीलाई नियन्त्रण गरेर पहलकदमी अगाडि बढाइरहेको छ ।
म सोलाबाङ पुग्दा सोच्न बाध्य हुन्छु त्यो भलाक्चाको डाँडोलाई हेरेर । जुन डाँडोले कहिलेकाँही घाम छेके पनि पानी दिन भने कहिल्यै छाडेको छैन ।
तर अहिले ताजुब लाग्छ त्यो डाँडो किन मुसिकोटसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नबाट पछि हट्यो ?
दुर्गा र पैँसा →
यस वेवसाइटका विषयवस्तु Select Category अडियो (7) अनुत्तरित् प्रश्न (? ? ?) (1) अनुवाद (1) द जङ्गल बुक (1) उखानटुक्काहरु (10) उपन्यास (10) कथा (29) लघु कथा (5) कविता (81) गद्य कविता (34) छन्द कविता (15) पद्य कविता (15) मुक्तक/गजल (11) गीत (20) शब्द (17) गीता शब्दकोष (1) गीती नाटक (2) चिठीपत्र (3) तस्बिर आफै बोल्छ (3) दैनिक संक्षिप्त समाचार (1) धर्म (2) नीति तथा कानून (13) प्रवचन संग्रह (31) भिडिअो (1) मननीय भनाइ (42) मनोरञ्जन (76) मुरली (1) मेरो बारेमा (4) सम्पर्क (1) लेख/आलेख (19) लेखा सम्वद्ध कानूनहरु (18) विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु (4) विविध (8) शब्दकोष (11) श्रीमद्‍भागवतगीता सार (18) संक्षिप्त रुप (10) संक्षिप्त रूप (3) संक्षिप्त रुप (1) समीक्षा (3) संस्मरण (30) रुकुम साहित्यिक नियात्रा-०७५ (8) स्वविकसित सफ्टवेयरहरु (13) स्वागतम् (1)
June 18, 2019 Purna Oli 0
May 26, 2019 Purna Oli 0
कविता छन्द कविता
April 15, 2019 Purna Oli 0
April 6, 2019 Purna Oli 0